Mai Chibwe VekwaZimuto: Siyanisai Nzvimbo, Nguva, neMaitire
Kana uchigara nomurume/mukadzi mumba, gara fungwa yako ichifunga kuti munofanira kuva nenguva yerhoji. Zvakangofanana nokuti kana une vana mumba vanofanira kuva nenguva yokuenda kuchikoro. Kana uchishanda unofanira kuziva nguva yokuenda kubasa. Kana uchipinda CHURCH unofanira kuziva nguva yokuenda kuchurch. Saka kana une murume/mukadzi unofanira kuva nenguva yaunoti iyi ndiyo nguva yerhoji mumba medu.
Rhoji inonaka kana zemo rangoerekana rauya wanga usingarifungiri. Sokuti waperekedzwa kuchitima mowanika chitima chichinzi chafira kwekuti saka chichanonoka kwemaawa maviri. Munokwanisa kutova nenguva ipapo yokuita zvimwe musango makamirira chitima. Ndoyeuka musi watakanoona Great Zimbabwe ndokupedzisira tava ku Kyle Dam (Mutirikwi) Takati taona zvese izvi ndokupedzisira tasiya mota padhamu ndokufamba mudondo ikoko. Zvakaitika mudondo roku Kyle muna 2008 handizvikangamwi. Rakabva raita zuva rakanaka chose. Munhu wemukadzi kana une murume wako mumota fambawo une hangachefu mubhegi mako nokuti uchada kupukuta zvinochururuka. Hauzivi panoitikira zvawakarooregwa.
Saka tiri kuona zvinhu zviviri apa. Kunoti rhoji yamunoita muchiziva kuti ichaitika nguva yokuti, kozoti imwe inongoitika. Yamunoita muchiziva iyo munofanira kudzidza kuita zvakasiyana siyana pamaitire enyu kuti zvisangofanana zuva nezuva. Kana mukangoitana zvakafanana mazuva ese zvinobhowa. Unofanira kuti pamunotanga paya usaziva kuti zvichapera sei. Hauzivi kuti uchahwimwi nhasi asi unongoziva kuti rhoji iriko. Ndosaka ndaiti munokwanisa kundogeza mese motangira mushawa mozopedzisira pamubhedha. Kana vana vaenda kunovata kare, munokwanisa kutangira pasofa kana mada mopedzerapo kana kuti moenda kumwe monopedzisa. Kuda kwamaiita vhiki yokutanga kugara mese ndiko kuda kwamunofanira kuramba munako mumba. Usarega murume achikudzikisira.
Muri pasofa unokwanisa kungotanga kupurudzira murume, wopedzisira wamuvhura zipi waisa ruoko mubhurugwa muchiona TV yenyu. Unoonawo uye okupatsanisa makumbo oisawo ruoko pakati opinza chigumwe mukati okwenyakwenya arimo. Munopedzisira matoumburusana ipapo pasofa kana pasi chaipo. Chakanakira pasi ndechokuti chiuno hakuna kwachinoenda kana murume achikoira nokuti hapatefeteri saka unongosimudzira muchisangana ipapo uchitohwa kuti ari kunyatsopinda zvine simba.
Ndisati ndanyora maitire akasiyanasiyana regai nditange ndati umwe noumwe ane maitire aanoziva saka apa ndiri kungonyora andinoziva uye andinoti anonaka. Kana uchidawo kutiudza mamwe maitire, tiudzewo tinakigwewo nazvo. Tiri pano kubatsirana mudzimba dzedu kuti nhamo dzemo dziite shoma.
Kusiyana kwemaitire kwakawanda, munokwanisa kuita zvokuti pamwe munovhenganisa maitire enyu
Mukadzi pasi murume pamusoro makatarisana makumbo emukadzi akavhurika ari pasi.
Mukadzi pasi murume pamusoro makatarisana makumbo emukadzi akavhurika ari pamafudzi emurume
Mukadzi pasi murume pamusoro makatarisana makumbo emukadzi akavhurika ari kuseri kwemabvi emurume
Mukadzi pasi murume pamusoro makatarisana makumbo emukadzi akati rimwe pasi rimwe seri kwebvi remurume. Kana usina kujaira izvi zvinonaka chose nokuti unobaiwa baiwa pasina kururama pasingasisviki chombo
Mukadzi pasi avete nedumbu akasimudza chiuno zvishoma makumbo akatarangana, murume pamusoro ari pakati pemakumbo emukadzi. Ukadhefura musana unohwa murume achinyura mukati kati nokuda kwemapindire acho. Makadai murume anononoka kudiridza asi iwe unokasira kupedza.
Mukadzi pasi avete nedivi toti rerudyi. Anosimudza gumbo reruboshwe oturika pafudzi remurume. Murume ogwadama akatanyanga gumbo rerudyi oswedera pamukadzi opinza. Kana akakubatirira zvakanaka unohwa pane moyo nazvo nokuti anokwanisa kugofa pese paada nokungokwidza nokuderedza mabvi ake kana kungokusimudzira. Chombo chese zvacho chinopinda zvokuti maitire awa akanaka kana uchida mimba nokuti unoiswa urume mberi kwechitubu.
Mukadzi pasi avete nedumbu akasimudza chiuno zvishoma makumbo ari pamwe chete, murume pamusoro akatanyanga mukadzi.Pakadai hazvinetsi kusumudzira chiuno kururamisana, uyezve kushinya chombo. Pfavisa muviri unyatsohwa pane moyo makadai.
Mukadzi mberi akafongora akasimudza chiuno mudenga akadhefura musana, murume ari shure akagwadama akabatirira chiuno chemukadzi. Apa zvobva nokuti mabvi ako aripapi. Anokwanisa kuva kumashure pakati kana kuti kuno mberi wakaita sokugonya. Kana ari nechesure unokwanisa kudhefura musana chitubu choita sokutarisa mudenga. Kana mabvi ari pedo nokumazamu, chitubu chinotarisa kumashure. Unohwa pauri kupinzwa kusiyana kwazvo.
Mukadzi anovata nedivi akafuratira murume, osimudza gumbo odhefura musana murume opinza chombo mukadzi oderedza gumbo raambosimudza, motoita henyu basa. Kana mukadzi akaita seakakotama murume anonyudza chaizvo uye anogofagofa pakasiyana siyana arimo.
Murume pasi mukadzi pamusoro akatanyanga murume makatarisana. Unokwanisa kumwa minyatso yemurume, uye kupima wega kuti chombo chopinda zvakadii. Ukatitasa mudenga (vertical) unobaiwa baiwa kuno kumadziro ekumusoro kwechitubu tichiuya kubhinzi, kunova ndiko kunoti murume akapinza chigumwe anokwanisa kukwenyererako kuchinaka. Kana ukabaiwabaiwako kunonaka kupfiiura madziro ezasi. Kana uri pamusoro unoita zvawada murume achingotevedzera izvozvo
Murume pasi mukadzi pamusoro akatanyanga murume wakafuratira murume. Unokwanisa kuzvisapota wakaisa maoko ako pamabvi ake Asi maitire awa anonetsa nokuti chombo chinobuda, buda kana mava kunakigwa moita nesimba. Kana musingamhanyi henyu hazvinyanyi kunetsa. Ziva kuti murume anoona chombo chake chichipinda saka jaivha zvine purani yezvaari kuona.
Mukadzi okotama tsoka dziri pasi akabata mubhedha, cheya, saidhibhodhi kana sofa, murume opinza akamira kumashure obva abatira chiuno chomukadzi.
Mukadzi ogara patafura makumbo akarembera kumucheto ovhura makumbo murume oinda pakati opinza chombo. Mukadzi anokwanisa kusunga murume nemakumbo kuti chombo chisangobuda chega. Kukoira kunonetsa apa nokuti hamuna sapoti yakakwana nengari yokushaya pokubatira. Zvishoma izvozvo zvinonaka chose nokuti murume anenge ari pedo pedo uku ari mukati. Unokwanisa kumukisa nokumu batirira zvakanaka asi kupinda kwechombo kushoma saka chingangobuda chega. Chikabuda kungoisa ruoko pakati penyu wochidzosera moramba muchiita. Iyewo onokumwa mazamu.
Mukadzi ogara pacheya makumbo tsoka dziri pasi ovhura makumbo murume ogwadama pakati opinza chombo. Murume anoisa maoko ake keseri kwemagaro emukadzi obatirira. Mukadziwo anoisa maoko ake nemakumbo ake kuseri kwemurume kuti anyatse kuhwa chiuno chemurume pakukoigwa.
Mukadzi mberi akamira, murume shure akamirawo, mukadzi okotamira akapatsanisa makumbo, murume oswedera opinza chombo. Izvi zvinoda mukadzi akati pfupikei pamurume pazviuno zvavo.
Mukadzi mberi akamira gumbo roruboshe pacheya rorudyi pasi, uku akabata madziro mberi akakotamira murume. Murume shure amirewo. Apa havanetseki kupindana kana kukoirana nokuda kwesapoti yemadziro ari mberi.
Mukadzi mberi akamira gumbo roruboshe pacheya rorudyi pasi, akafuratira madziro akatarisana nomurume. Murume oswedera vosangana. Kukisana hakunetsi uye mukadzi anobatirira murume murume ongoona nezvokupinda mumukadzi nokukoirana kwenyu.
Mukadzi ogara patafura makumbo akarembera. Murume oenda pakati pemakumbo oswededza mukadzi pedo opinda.
Maitire evanhu haaperi. Chikuru ndechokusiyanisa maitire nguva nenguva kuti musajairira kungoita zvimwe chetezvo. Mukagarosiyanisa unohwa chombo chomurume wako chichisvika kwausina kujaira kukwizwa zvinova zvinonaka. Uyezve fungwa yako unofunga kuti musikahwa zvinva zvinowedzera kunaka.
Sezvandamboreva kuti garai muchiita zvakasiyana siyana pamaitire enyu kuti musafinhwa nemaitire amwe chete. Dzidzawo kutaura zvaunoda kuita nomurume wako. Varume vanhu vanoda kugara vachiziva kuti mukadzi anoda kurhojewa naye. Usangorega murume achivata asina kuwana zvinoitisa hope. Kana pane chanetsa tauriranai kuti chii mapedza moita zviitwa movata shungu dzapera. Ukati uku une nhamo, uku washaya rhoji, watove nenhamo mbiri ipapo. Kana murume achifunganya kana kuti adzingwa basa iwe chimutonhodza moyo nokumuunza pedo uye kuti azive kuti iwe chero zvodii unomuda uye muviri wako ndewake.
Imiwo varume, ukawana mukadzi wako akafongora achikorobha kana kuti achiita chimwe chinhu, mamirire aakaita akakufungisa rhoji, rega zvokutarira wachi yako kuona kuti une nguva here, Ingotanga kupurudzira magaro ake womunyengerera womubvisa bhurugwa wotoita. Tese vakadzi zvokupiwa rhoji yatanga tisingafungiri zvinonaka chose asi unohwa ndichinyebera kukomburena kuti ndoda kupedza kuita zvandanga ndichiita asi uku ndiri kutokukisawo nomoyo wose.
Ukaterera vakadzi tichitaurirana unohwa nyaya dzerhoji chete dzichibuda nechibhende. Unohwa umwe achiti handina kuvata zvakanaka madeko. Ndakanonoka kuvata. Asi ukavhunza kuti chii chainetsa unohwa pasina nyaya. Ziva kuti murume akamunonotsa uye ipapa ari kutotibhositira hedu kuita sokuti varume vedu havatinonotsi kuvata.
Ziva kuti mukadzi/murume wako anoita zemo rakawanda nguvai. Ini ndowanzopepuka ndine zemo kuseni. Murume anowanza zemo manheru. Hino pakadai panoda kuhwisisana nokuti umwe noumwe ane nguva dzake asi muviri waanoda ndiwo umwe chetewo. Usarega umwe wako achiita zemo rigosvika pakupera pasina zvawamuitira. Makaroorana kuti mupane mushonga wezemo. Zvokuzoti vana, kubika, kuwacha, chii chii, zvese zvinhu zvinongoitwa kuti muwane mukana werhoji chete. Pasina rhoji hapana muchato.
Siyanisai maitire sezvamunongosiyanisa chikafu chamunodya kuti muite BALANCED DIET, munosiyanisawo maitire enyu kuti muite balanced diet yokunakigwa nazvo. Zvinhu zvikatanga kubhowa mumba ndipo paunoona vanhu vave kutarisa umwe musikana akasunga magaro, kana umwe murume ane chipakiti pamberi, nemakumbo akasimba. Munhu abva adya kumba kwake haadyi kumakwato. Ukaona murume wako akati twii kuseni, wedzera nokumupurudzira chombo womuudza kuti ngaachishandise. Kwete kuchiignowa kusvika murume aenda kubasa. Chero zvikasatora nguva refu anoenda ane mufaro.
Nzvimbo dzamunokwanisa kuenda
Kana mvura ichinaya muri musango muchinaiwa nemvura musina hembhe. Kazhinji hakuna vanhu kana mhuka dzinofamba kuchinaya saka munokwanisa kuita pasina anokuonai. Kurhojana zvamusina kumboita kare kunonaka saka chero pamawana mukana wekuita chinhu chitsva itai.
Pamusoro pegomo koda kusviba. Ipapo munenge makwira gomo mozorora mava pamusoro. Kunyika dzine zvikomo se Scotland, Wales, Eastern Zimbabwe, Mashonaland North, Matebeleland, kusina mabhinya.
Mumota munoita chose zvikuru kna mange muri pagwendo murume wongomisa mota zvisina purani ototanga kukukisa ipapo. Pamwewo iwe ukaona kuti panomirika, unokwanisa kuti murume amire womutangira basa. Musamisa mota panosungisa kana kuti pane mota dzimwe dzakawanda pamunoonekwa. Kurhojana mumota kunoitwa navanhu vakawanda chose nokuti kunonaka. Chinoita kuti kunake ndechokuti kunorovesa hana nokuda kokuti mungangowanikidzwa navanhu vamusingazivi. Tangai makiya mota.
Kana mune mota dziya dzinohi People Carrier, munovanzarika ma seat ekumashure kuti muwedzere nzwimbo, mobva mavanda kuseri kwemaseat ekumberi. Kana mota yenyu ine mahwindo anongoonekwa kubva mukati, zvinoshanda chose. Pane zvimaPLASTIC zvamunokwanisa kutenga monamira pamahwindo kuti vari kuzhe vasaona zviri mukati. Zvinobatsira kuti mbavha dzisaona zvirimo uye kuti mukwanise kuita zvamunoda mumota yenu pasina anookuonai.
Muhotera, toranai mumboenda kuhotera. Kana musina vana potai muchimboenda kumahotera muchinofariko. Munongosvika movharirana muROOM yenyu, modzima mafoni enyu, mopana Quality time, weekend yese. Mozobvapo Sunday manheru modzokera kumba. Mangwana kubasa. Zvinhu zvakadai ndizvo zvamunozoti matukana umwe musi, umwe wotanga kuyeuchidza umwe kana arangarira kudanana kwamaimboita. Chinonyanyonaka kuisana muhotera ndechokuti unonyatsoziva kuti panguva ye Weekend yese murume ndewako. Zvokubika nokukorobha mumba hapana. Zvokunoshopa hapana, zvokupopotedzana nevepa next door hapana. Hapana visitor anouya kuzokutorerai nguva yenyu. Kana uchida mimba torana nomurume wako moenda kuhotera monoitirako. Munozodzoka kumba makarelaxa mese. Kana une zvaunoda kuzama zvausina kumboita, ndiyo nguva yacho. Munokwanisa kupedza nguva yese iyi musina kumbobuda muROOM yenyu, chikafu chichingounzwa nevashandi. Kana wafunga kuisira murume mushonga wekumisa chombo, chimuudza kuti ndizvo zvaunoda kuita, kwete kungomuisira asingazivi. Rongai mese. Mishonga iriko hayo asi ziva kuti yakawanda inokwanisa kuitisa murume HEART ATTACK.
Pamusoro pemutanho wemajanga echibage. Unovaviwa hako magaro asi unonakigwa, uye hauzvikangamwi upenyu hwako hwese.
Mumunda wechibage kana wegorosi. Zvoda manheru izvi nokuti unokwanisa kutevegwa nevane maziso. 2005 igore ratakaenda kumusha ndikadzidza kuti munda wechibage inzwimbo yakanaka chose kurhojeranamo.
Pedo negwizi mvura ichihwikwa ichierera. Muri musango ipapo. Ndakazvidzidzira mumakwenzi uku dhamhu riya rinohi Kyle riri zasi kweMasvingo, muna 2005. Chenjera nyoka. Kana ukajaira kufamba ne Zambia yako mumota, uchaona kuti inoita mabasa akawanda. Ukabuda mumota buda neZambia yako kana uchifungira kuti mungangokwanisa kuva nenguva yakadaro.
Mugarage remota pasi chaipo pakongiriti. Kana une chidimu chekapeti tora uende nacho nokuti kongiri inonetsa kugogonera magaro asi kunaka kwekusiyana kwenzvimbo kunodarika kugogonera kwekongiri. Ukazoisa chokuwadzira zvinoita nani uye unokwanisa kufongora mabvi asingagwadzi. Pasi pakanaka kuti chiuno hakuna kwachinoenda nokuti hapatefeteri sezvinoita mubhedha. Ukangosimudzira munongosanganapo uchitohwa kuti pano ndawanikidzwa nomurume, Hapana pokuvanda.
Panze mwedzi wakachena. Kana muri munyika inopisa munokwanisa kuenda mugadheni pakavanda mwedzi wakachena mowadzira Zambia mugadzira mwana wenyu.
Kana usina kumboitira mutende maenda ku Campsite chimbozamai. Ukapedza zuva uri kumafuramhepo moti kwasviba mopinda mutendhe yenyu mega vamwe vaenda kune dzavo, munomboita nguva yakanaka. Asi ziva kuti tendhe hausi mudhuri saka zvese zvamunoita zvinohwikwa nevanopfuura. Ziva pokumisa tendhe yako kure nedzimwe.
Imbojoinisai ma SLEEPING BAG maviri kuita rimwe chete re dhabhuri, mopindamo momboitiramo.
Kurhojerana muchitima kana mubhazi hazviiti. Munosungwa.
Kana muri mumba menyu, kurudziranai kuti kana muri muLIVING ROOM, vana vavata, muchiziva kuti hapana chinovamutsa, musangojaira kumirira nguva yokuvata uye kuitira pamubhedha. Munombopotawo muchirhojerana pasi kana pasofa. Kungovhara maketeni mototanga kubatana kukwidzana zemo.
Pane imwe nguva yamuoona vanhu pa TV vachikisana kana kubatana nhengo dzomuviri. Kana zvakukwidza zemo ingoudza murume kuti DAI NDIRINI azive kuti wave kuda. Ramba uchitaura nenyaya yacho kusvika aswedera pedo. Pane dzimwe nguva dzokuti unongoita zemo usingazivi kuti rabvepi. Pamwe usina kana nguva. Munokwanisa kungorhojerana ipapo pamuri pedzezvo modzokera kune zvamange muchiita. Mumba menyu hazvinei kuti muri kupi, MuKicheni, muSipeya, muLiving ROOM, MuBathroom, MuBedroom, zvese zvinoita. Kutombodzinganisana mumba zvinonakidza futi. Hino murume kukudzinganisa akamira chombo zvinosetsa futi asi iwewo chinyebera kutiza womurega okubata, wombonyebera kusunga makumbo kuti asakwanisa kubvisa bhurhugwa asi kuri kutamba henyu mese muchitoziva kuti mava kutozorhojana chete.
Kana mavhakasha mukapiwa imba, ongororai mamirire akaita imba yacho. Kana isina Ceiling ziva kuti munohwikwa nevavete mune mamwe maROOM.
Kana muri kumusha musajaira kuitira seri kwechuru, nokuti nyoka dzinoita mwena pachuru. Unorumwa ukafa usina bhurugwa. Vanhu vaya vanotsvaka huni chero mumapurazi, vanofarira kutarisa pachuru. Iwe kana wakatsinzina maziso murume ari mukati uchinakigwa nazvo, hauzohwi munhu ari kuvhuna huni. Vokuvhima vaya vanoda kutarisa kuti muchuru munei. Zvikomana zvinotsvaka hubvu nesambasi, netsvoritsvoto zvinouyawo pachuru. Vakadzi vanotsvaka bwowa vanopfuura nepachuru. Kana mada zvomusango moona kuti mawanawo pakavanda. Mubani manheru munoita.
Zivazve kuti usiku SOUND inosvika kure saka ruma mazino kana muri panze. Mumahotera hamuna basa nokuti waita ruzha gwakawanda sei. Kana muri mubhavhu musawanzisa mvura nokuti unokwanisa kupfachura imwe yoenda pasi wozonetseka kukorobha.
Kune dzimwe nyika mukawanikidzwa muri musango munosungwa. KuZimbabwe mapurisa haateveri mutemo saka mukawanikidzwa vanongoita zvavafunga ipapo.
Onaiwo vhidhiyo iyo yakahi KUBATWA UCHIHURA MUZIMBABWE
kubviswa umhandara kana kubviswa ujaya
musi wandakatanga chihurendiwo musi wekutanga rufu
kuita bonde une mimba
kukoira kuita sei
kubatwa minyatso nemukomana
Zviratidzo zvemukadzi kana achida kuiswa
mabatirwo emurume pabonde
mabatirwo emukadzi pabonde
kudyiwa bhinzi zvinonaka
magaro emukadzi ane basa rei pabonde
Kuda murume wako
Chikapa chinoitwa sei?
Posted by Mai E Chibwe at 07:51